Mashiinka Xayndaabka silsiladda silsiladda mashiinka siligga silsiladda otomaatigga ah waxaa sidoo kale loo yaqaan mashiinka mesh dheeman, dhuxusha mashiinka mesh taageerada mashiinka, barroosinka mashiinka mesh. Mashiinka xayndaabka isku xidhka silsiladda silsiladda silsiladda silsiladda silsiladda silsiladda 'silsiladda mesh silsiladda' oo silig silig ah oo xarkaha silig kaarboon yar, silig bir birta ah, silig aluminium ah, siligga PVC iyo siligga lagu buufiyo ee siligga lagu xidho Roobka waa isku mid, dusha sare waa siman yahay, muuqaalkuna waa xarrago. , Wareeg silig ah oo la hagaajin karo, dhexroor silig la hagaajin karo, ma fududa in la xoqo, nolosha dheer, fudud ...
Baler Haydarooliga Mashiinkaani wuxuu inta badan ka kooban yahay jir, saxan cadaadis, silsilad saliid ah, unugga bamka saliidda, taangiga saliidda, sanduuqa korantada iyo wixii la mid ah. Marka mashiinku shaqeynayo, saliida cadaadiska ee ay soo saarto qeybta bamka saliida waxaa xadeeya waalka badbaadada wuxuuna galaa waalka tilmaanta gacanta. Marka baalka jihada gacanta uu ku shaqeeyo booska bidix, saliida cadaadiska waxay galeysaa qolka sare ee silsiladda, saxanka cadaadiska wuxuu hoos ugu sii socdaa isagoo sii maraya bistoolada iyo usha piston. Tan ...
Mashiinka fuuli jiray Gabion Mashiinka guga ee giraantu waa qalabka taageera mashiinka shabaqa shabaqa dhagaxa ah. Qalabku wuxuu leeyahay dhowr ulood oo isdabamarin guga, oo wareegaya isla waqtigaas kadib markuu bilaabmo, Guga si otomaatig ah ayuu u dhaawacmaa, waana la rogi karaa oo la dhaawaci karaa dhowr lakab si loo kordhiyo dhererka guga qulqulaya, hoos u dhig tirada is-beddelka guga marka la qalloocinayo siligga, oo kor u qaad hufnaanta siligga. Mashiinka fuuli jiray guga kaliya wuxuu u baahan yahay inuu bedelo c ...
Mashiinka wax lagu tolo ee jardiinada ee ay soo saarto warshaddeenu waa nooc cusub oo ka mid ah mashiinnada wax lagu tolo oo bir ah oo leh astaamo u gaar ah. Taxanaha alaabtan waxay adeegsadaan tikniyoolajiyad mesh silig, oo si toos ah u soo saari kara shabagyada beerta oo leh tilmaamo ku habboon. Mashiinno iyo qalab kala duwan ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Mashiinka waxaa badanaa lagu dhajiyay birta tayada sare leh, awoodda waxaa bixiya mashiinka korantada. Mashiinka birta ah ee birta ah ee birta ah wuxuu leeyahay astaamaha naqshad macquul ah, qaab dhismeed fudud, hawlgal deggan, waxqabad wanaagsan, waxtarka sare iyo dayactirka habboon.
Mashiinku wuxuu ka kooban yahay qayb xarigga siligga iyo qayb fiilooyinka lagu dhejiyo. Mashiinka wuxuu u baahan yahay shaqaale ku shaqeeya.